Mugadziri Wemubhedha Wakanakisisa uye Fekitori | Medo
Mubhedha wakasimudzwa Seoul Kubva padivi, parutivi pemubhedha panotaridzika kunge mukadzi akasunga chiuno. Kumberi, iwo maviri ekumashure akasununguka uye haakanganise mashandisiro avo. Saizi yamambo mubhedha nemusoro weboardboard inoenderana yakafanana nemafuta ekupenda. Iyo Seoul wingback yakakwira. Munguva yekuzorora, tinogona kugara pamubhedha kuverenga kana kutaura. Kune macushion mahombe padivi pemubhedha. Izvo zviri nyore kugadzirisa.
Yemazuva Ano Fenicha yekurara Mabhedha
Kurutivi Tafura 500x400x470mm
Mumwe Seater 800x860x780mm
Zvekunze Zvinyorwa: Cotton yerineni + Yakakosha dehwe
Furemu: Simbi-yakagadzirirwa mubhedha
Mubhedha uye mubhedha: Kupeta mubhedha furemu (furemu yesimbi uye yakasimba huni huni)
Mubhedha Wemubhedha: Mucheche Cotton Kuzadza
Gumbo Remubhedha: Iron Simbi Gumbo
Iwo ekushongedza mativi evhavha akadzika mune yakasviba grey jira, ichiwedzera kune mutsara pfungwa uye kuratidza inofadza mamiriro. Yakakwira-density sponge-yakazadza mapiro inotsigira misoro yedu nemapfudzi. Inotaridzika kugadzikana, iine hukama hwakakosha neyakaenzana dhizaina yezvigadzirwa dhizaini.
Micheka masofa idiki dhizaini inozivikanwa neinotsvedza armrest iyo yakagadzirirwa maererano neErgonomics.
Iyo Carton Simbi Furemu
Yakakwira mhando Carton Simbi Furemu.
Dhizaini yazvino, yakasununguka, yakasununguka, yakashongedzwa.
Kugadzira kunzwa kwekugara mugore.
Bhedha yakazara seti yakakwana kumakamuri. Iyo furemu yakakwira-density chipanji inoderedza kukanganisa.
Donje rakapfava rakafanana neganda remwana.
Mubhedha, Confort, Grand Big
Mukati mechikuru chakakura chiri kuzadza pasi chipanji, chakanyorovera uye chakanyongana!
MuPine huni chimiro chakaputirwa mune yakakwira-kugadzikana kusiana-density polyurethane foam. backrests mune plywood yeakasiyana makobvu, akafukidzwa mukukwirira-kusimba kusiana-density polyurethane foam, quilting yekuwedzera kupfava.
Mubhedha wakasimba wemubhedha
Simbi furemu + danda rakasimba rehuni; Kupeta dhizaini. Yakawedzera nzvimbo yekuchengetedza, kubata kuri nyore, nyore disassembly, inochengetedzwa.
Yedu-yakatarisana nevatengi kufunga inoona kuti yedu ye-muzvitoro mamodheru nemabhedha echinyakare anonyanya kugadzikana uye akasimba kupfuura inokwikwidza fanicha Tine yedu yepamusoro yekuparadza kudzora uye kurongedza kugadzirwa, tinokwira pamusoro pevamwe vagadziri vemibhedha maererano nemitengo yakaderera uye mhando yepamusoro.
Yakasarudzika King saizi Mabhedha
MEDO inopa vatengi neyakagadziriswa mambo saizi mibhedha kusangana nezvinodiwa zvemusika wakasiyana. Kunze kwehukuru, isu tinopawo yekuchengetera dhizaini yemaitiro anokwanisa senge sarudzo yekusarudza.
Nerongwa hwedu hwekuva one stop imba fanicha mupi, kugona kwedu uye kugona kwemabhedha dhizaini uye kugadzirwa kuri kuwedzera gore gore.
Chikwata chine ruzivo uye vashandi vanoona yega yega yezvigadzirwa zveMEDO ndeyemhando yepamusoro kuti udzikise maressales ekufona mitengo.
Yakazara Saizi Mubhedha Furemu
Yakazara Saizi Mubhedha Furemu nehurefu-hunogadziriswa mubhedha slat. Iyo tambo yakapusa yakanyatsoratidza kukosha kweiyo minimalist dhizaini dhizaini. Iyo yebhodhi yepamusoro izere nemamowuru maviri makuru ayo anowedzera mamwe maitiro.
Havasi vese vatengi vako vane hombe dzekurara, iwe unoda mambokadzi saizi mibhedha kutora iyo chikamu chemusika.
MEDO inopa nzvimbo yekuchengetedza mambokadzi saizi mibhedha inoenderana nenzvimbo diki. Iyo ine yazvino dhizaini ine yakatetepa asi yakasimba padivi pani uye headboard yekuona ese ari maviri kuchengetedzeka uye nzvimbo yekuchengetedza zvinodiwa.
Kupa yakasarudzika yekuvhara zvinhu kusarudzwa, iwe unozokwanisa kugutsa sarudzo dzako nemavara uye zvigadzirwa zvejira uye dehwe.
Tine YEDU CERTIFICATE YEDESITI PATENT, Kana paine kutevedzera, tinogona kutsvaga chikwereti.
Kurutivi Tafura 500x400x450mm
Mumwe Seater / Ottoman 800x860x780mm / 500x380x380mm
Zvekunze Zvinyorwa: Microfiber dehwe
Furemu: Ash huni furemu
Mubhedha uye mubhedha: Natural Feather / Kupeta mubhedha furemu (simbi fureni uye yakasimba huni tambo)
Gumbo Remubhedha: Solid Wood Gumbo
Zvekunze Zvinyorwa: Eco jira
Mubhedha uye mubhedha: Natural Feather
Mubhedha Wemubhedha: Kupeta mubhedha furemu (furemu yesimbi uye yakasimba huni huni)
Gumbo Remubhedha: Carbon Simbi Gumbo
Zvekunze Zvinyorwa: Cotton uye Mucheka Mucheka
Kurutivi Tafura 540x400x470mm
Furemu: Nhema Carbon Stainless Simbi-yakagadzirirwa mubhedha
Gumbo Remubhedha: Nhema Kabhoni Isina Simbi Gumbo
Pashure: Turnable inotsvedza System